जुनबेला रमेश यसरी पढ्ने, बोल्ने गर्थे रमेश प्रसाई! हेर्नुस यो पुरानो भिडियो (भिडियो सहित) – Ap Nepal
जुनबेला रमेश यसरी पढ्ने, बोल्ने गर्थे रमेश प्रसाई! हेर्नुस यो पुरानो भिडियो (भिडियो सहित)
आफ्ना तार्किक अभिव्यक्तिका कारण सामा’जिक सञ्जालहरुमा सँधै चर्चामा रहने रमेश प्रसाई अहिले फरक परिचयका साथ युट्युबमा छाए’का छन्। पूर्वी नेपाल’मा एक रेडियो पत्रकारका रुपमा स्थापित भएका दुबै आँखा देख्न नसक्ने युवक रमेश वक्तृत्व क्षमता’का कार’ण नेपाल’भर परिचित छन्।
उनी ‘मोटिभेशनल ट्रेनर’ का रुपमा थुप्रै जिल्लामा समेत पुगि’सकेका छन्। राष्ट्र र राष्ट्रियता’का विषय’मा तार्किक रुपमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिने रमेश स्पष्टवक्ता, मृदुभाषी र विभिन्न भाषा’को ज्ञान भएका युवक पनि हुन्।
यीनै रमेश अहिले दोहोरी गायक’का रुपमा चर्चामा छन्। एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम ‘इन्द्रेणी’ मा रमेशले गाएको दोहोरी गीत निरन्तर ट्रेन्डिङमा छ।
लोक दोहोरी कार्यक्रम’हरुबाट चर्चामा आएकी गायिका कल्पना दाहालसँग रमेशले गाएको काठे भाका’को दो’होरी गीत अहिलेसम्म ३४ लाखभ:न्दा बढी दर्शक:ले हेरिसकेका छन्।
यो दोहोरी एक हप्ता’भन्दा लामो समय ट्रेन्डिङ नम्बर नम्बर एकमा रहेको थियो भने केही दिनयता दुई नम्ब’रमा झरेको छ। सामान्य रुपमा आफू’लाई गायक भनेर नचिनाउने रमेशले पहिलो पटक गाएको काठे भाका’लाई दर्शक तथा स्रोता’ले निकै रुचाएको पाइएको छ।
साथै उनैले गाए’को अर्को दोहोरी पनि निकै रुचाइ’एको छ। जेरी भनेर चिनिने बबिता बानियाँसँग उनले खे’लेको टुक्का र दोहोरी गीतलाई पनि दर्श’क र स्रोताले उत्तिकै रुचाएका छन्।
जन्मजात नै दुबै आँखा नभए’का युवक रमेशले आफूलाई बहुआयामिक व्यक्तिका रुपमा स्थापित गर्दै लैजाँदा उनी दोहोरी गायकका रुपमा पनि दर्शकहरुले रुचाएका हुन्।
उनले दोहोरी गा’एको इन्द्रेणी कार्यक्र’मले रमेशलाई आफ्नै टीममा अनुबन्धसमेत गरेको छ। समसाम’यिक विषयमा राम्रो सूचना राखेका उनले इन्द्रेणीसँगकै सहका’र्यमा अन्तर्वार्तामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तया’री गरेका छन् ।
यही मंसिर २२ गते रमेश प्रसाई विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् ।३ वर्षदेखि कालीकोटकी नन्दा सिंहसँगको प्रेममा रहेका रमेशले लगनगाँठो कसेका हुन् ।
धरान नगरपालिका वडा नं १ स्थित उद्योग वाणिज्य संघको पार्टी प्यालेसमा उनको विवाहको समारोह आयोजना गरिएको थियो ।विवाहमा दुवै तर्फका आफन्त र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।
राजनीतिक टिप्पणी गर्न पनि माहिर रमेशले गाएको ‘रिंकेबुङको राँगो’ को बोलको गीत अहिले टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । साथै उनी लोकदोहोरी कार्यक्रम इन्द्रेणीमा समेत आबद्ध छन् भने नन्दाले काठमाडौँमा बालआश्रम चलाउँदै आइरहेकी छन् ।
त्यतै उने रमेश प्रसा’ईको पुरानो भिडि’यो पनि अहिले युटुब मा भाईरल बनेको छ । उक्त भिडि’योमा उनीले अध्य’यन गर्ने विद्यालय र उनको क्रियाकलाप देखिएको छ । त्यहाँ उनका साथि जीवन विष्ट पनि साथमै देखिन्छन् ।
यहाँ तल थि’चेर भिडि’यो हेर्नुहो’स
Prevहिरोइन भन्दा कम छैनन् गायिका कल्पना दाहाल ,हेरौं उनले सार्बजनिक गरेका यस्ता तस्बिरहरू
Nextबजाज अफरः ५० प्रतिशत रकम बुझाएर बिना ब्याज बजाजका बाइक किन्न सकिने ..मुल्य सुची सहित
यस्तो छ तपाँईलाई यो साता कति शुभः छ? हेर्नुहोस् असोज ३ गते देखी असोज ९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरून , हेर्नुहोस आज बि.स.२०७८ साल माघ १४ गते शुक्रबारको राशिफल